Boosaska shaqo ee bannaanLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaJobs in Finland
Boosaska shaqooyinka bannaan ee Finland oo af ingiriis ku qoranLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyö- ja elinkeinohallinto
Isku-xiryada bogagga boosaska shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Mustaqbalka ku shaqaaloobista xirfadaha kala gedisan ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEures-portaali
Macluumaadka shaqooyinka Yurub ka banaanLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Tilmaamaha raadinta shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Marka aad luqada taqaano, waxaa kuu sahlan in aad shaqo hesho islamarkaasna aad hawlahaada ka qabsato bulshada Finniska ah dhexdeeeda. Waxaad finnishka ama iswidhishka ka baran kartaa koorasyo kala duduwan ama si iskaa ah internetka.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan barashada luqada ka sii akhri qeybta InfoFinland Luqada Finnishka iyo Iswidishka .
Hagaha shaqada kirada ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHenkilöstöpalveluyritysten liitto
Shuruuc loo dejiyey shirkadaha shaqaalaha kireeya markii ay soo qaadanayaan shaqaale shisheeyeLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waxad sidoo kale aasaasan kartaa shirkad. Macluumaad ku saabsan sameysashada shirkad waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Samaynta shirkad ganacsi .
Haddii aadan shaqo heysan ama aad shaqo la’aan noqoto, shaqo laawe shaqo doon ah isaga diiwaangeli Xafiiska shaqada iyo xoogsashada ugu dambeyn maalinta shaqo la’aanta ugu horeysa.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Haddii aad shaqo la'aan noqotid .
Waxaad shaqo doon ahaan isaga diiwaangelin kartaa adeegga shabakadda Xafiiska Shaqada, xafiiska shaqada ee kuugu dhow ama telefoonka. Habka isdiiwaangelintu wuxuu ku xiranyahay waddanka aad u dhalatay. Telefoonka waad isku diiwaangelin kartaa, haddii aad horay macaamiil uga ahayd Xafiiska shaqada. Markaas jinsiyadaadu wax saamayn ah ma lahan. Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Haddii aad shaqo la’aan noqotid .
Iska diinwaagelinta Xafiiska shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTE-palvelut
Bandhigyo iyo fiidyoowyaal loogu talagalay dadka dalka u soo guurayLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Degidda Finland .
Adeegyada la-qabsashada dadka dalka u soo guurayLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOhjaamot.fi
Ohjaamo ( xafiiska hagista dhalinyarada)Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSamalleviivalle.fi
Hagaha waxbarashada iyo shaqo nololeedka loogu talagalay dhalinyaradaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyöelämään.fi
Ku soo dhowow nolosha shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa